Kuzokwethulwa isitshalo sokulungisa imifino unyaka wonke eStavropol Territory - umagazini i- "Potato System"
Kuzokwethulwa isitshalo sokulungisa imifino unyaka wonke eStavropol Territory
Ukucubungula imifino akuwona umqondo omusha webhizinisi, kepha kuyafaneleka. Eminyakeni yamuva nje, kube nokwanda okukhulu kwesithakazelo semifino nezithelo ezintsha ezweni. Kepha, ngeshwa, impilo yabo yeshalofu imfushane. Ngaphansi kwethonya lamagciwane kanye namagciwane ayingozi, imikhiqizo iyawohloka ngokushesha, ngakho-ke, kanye nokugcinwa nokuthengiswa kwemifino ku-SPPK "ArzgirOvoshch" eStavropol Territory, bathatha enye iphrojekthi. Namuhla, ipulazi linquma ukuthi yiluphi uhlobo lokucubungula oluthandayo.
“Udinga ukuqonda kahle ukuthi abantu badingani: ukomiswa, ukusulwa, ukubanda noma ukuwafaka. Isibonelo, amaketanga amakhulu okuthengisa athengisa imifino ehlutshiwe ehlutshiwe ebilisiwe. Singakwenza lokhu, kepha kufanele siqale sithole indlela eya kula manethiwekhi. Kunoma ikuphi, udinga ukukhetha into eyodwa bese uqala ukusebenzisa iphrojekthi ekwindla, ”kusho uRita Pak, usihlalo wobambiswano olusuka esifundeni sase-Arzgir.
Umfelandawonye wokulungiswa komthengi wezolimo "i-ArzgirOvoshch" e2019 waqala imisebenzi yayo ngokugcina nokuthengisa imifino. Namuhla ipulazi lithengisa izinsalela zesivuno sanyakenye - kusasele amathani angama-400.
Ngo-2020, i- "ArzgirOvoshch" yathola isibonelelo esivela eMnyangweni Wezolimo eStavropol Territory futhi ingxenye yayo yasebenzisa izimali ukuthenga imishini yokugcina nokulungisa imikhiqizo ezothengiswa. Izinhlelo zalo nyaka ukwakhiwa kwesitolo sokulungisa izinto. Ngo-2025, umfelandawonye uhlela ukufinyelela kumthamo omkhulu wokuthengisa ofinyelela kumathani ayi-5760 emifino ngonyaka.
“Ipulazi lithole isibonelelo semali esingama-ruble ayizigidi ezingama-25,3 ukuze kuthuthukiswe impahla kanye nesisekelo sobuchwepheshe sokucubungula nokupakisha imifino. Izindleko eziphelele zephrojekthi, kucatshangelwa eyayo imali yokusebenzisana, zifike kuma-ruble ayizigidi ezingama-42,2. Ngenxa yesibonelelo, umfelandawonye uthole imishini yokugcina nokulungiselela ukuthengisa imikhiqizo engama-ruble ayizigidi eziyi-12,9, kwavulwa namathuba emisebenzi amathathu, ”kuchaza uViktor Fetisov, iPhini likaNgqongqoshe wezoLimo eStavropol Territory.
Umfelandawonye awuhlelanga ukuma esitolo sokulungisa izinto - ngonyaka odlule uSPPK "ArzgirOvoshch" uthenge insimu yamabutho epulazi ahlanganisiwe, walungisa kancane izakhiwo zamahostela. Endaweni engamahektha ayi-9, amalungu ohlelo lokubambisana abeka izindlu zokugcina izithombo ukuze bathole imifino yokuqhutshwa komhlangano unyaka wonke. Kukhona nezinhlelo zokubeka ingadi encane. Izindleko zokwenza lo msebenzi kumfelandawonye zilinganiselwa kuma-ruble ayizigidi eziyi-100-150, ngosizo loMnyango Wezolimo kanye nokubandakanyeka kwemali mboleko evumayo, intengo yenhlangano iyaphakama.
“Ukwakha umjikelezo wokukhiqiza ovaliwe nokugwema ukudayiswa kwezinto zokusetshenziswa ngenhloso yokucubungula imikhiqizo yethu yiyona ndlela okufanele sidlule kuyo. Ukuvela kwezitolo ezicubungula kwenza ukuthi kube nokwenzeka ukusebenzisa imikhiqizo yezolimo ngokugcwele, ukunciphisa ukulahleka, ukukhuphula imali engenayo nokukhuphula izinga lenzuzo yokukhiqiza ngokujwayelekile, "kusho uVyacheslav Dryiger, iPhini Lokuqala LikaNgqongqoshe Wezolimo eStavropol Territory.
Ukusekelwa kombuso ekuthuthukiseni ukubambisana esifundeni kwenziwa kusukela ngo-2015. Inikela ngemikhombandlela emibili: isibonelelo sokuthuthukisa isisekelo sezinto ezibonakalayo nezobuchwepheshe sokucubungula nokumaketha imifelandawonye yabathengi bezolimo kanye noxhaso lokubuyisela ingxenye yezindleko zemifelandawonye yabathengi. Inani eliphelele lezezimali lango-2015-2020 lalingama-ruble ayizigidi ezingama-398; Ngalesi sikhathi, ama-SPPK ayi-18, abandakanyeka ekucubunguleni ubisi, inyama nenhlanzi, kanye nokucubungula nokupakisha uju nemifino, basebenzise ukwesekwa nguhulumeni.
Tags: ukucubungula imifinoI-Stavropol Territory
Iphrojekthi yokulahlwa kweziqukathi ezivela kwimikhiqizo yokuvikela izitshalo isiqalile e-Ukraine
Ukukhiqizwa kwe-calcium nitrate kuzovulwa eVeliky Novgorod